OneUp: Biputere Google azụmahịa m na akpaghị aka site na ndepụta RSS gị Martech Zone
Wednesday, October 13, 2021 Wednesday, October 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa mpaghara, ọ dị oke mkpa na ị ga-ejigide weebụsaịtị yana nke ọma yana akaụntụ Google My Business. Imirikiti ndị ọrụ nchọta ihe anaghị agagharị ma ọ bụ gaa na nsonaazụ organic nke na -achọta webụsaịtị gị… mkpọ map na ibe ọchụchọ nchọta (SERP).
Mkpọkọta maapụ bụ ngalaba nke nsonaazụ nsonaazụ ọchụchọ nke nwere maapụ na ndepụta azụmahịa gburugburu ebe ala gị. Ọ na -ewe ọtụtụ SERP ma ọ bụ atụmatụ njikọ aka nke mbụ maka ndị ọrụ ọchụchọ ịchọta ụlọ ahịa na ọrụ mkpọsa mpaghara.
Ihe ọtụtụ azụmaahịa na -aghọtaghị bụ na mkpọ map dabere na akaụntụ Google My Business gị, ọ bụghị webụsaịtị gị. Iji mee ka ọkwa dị elu na ọhụhụ dị na ngwugwu maapụ, ekwesịrị idobe akaụntụ azụmahịa gị yana nyocha na mmelite ugboro ugboro na nke na-adịbeghị anya. Nke a dị mfe iji aka ha mee mobile ngwa… Mana nke ahụ ka chọrọ ka ị na -ejikwa ikpo okwu ọzọ mgbe ị na -ere ahịa azụmahịa mpaghara gị.
Otu esi ejiko Google Business m
Gịnị ma ọ bụrụ na azụmahịa gị na -aga nke ọma WordPress saịtị na ịde blọgụ oge niile? Nke ahụ na -enye ohere ijikọ ọdịnaya gị n'ofe nyiwe ndị ọzọ, ndị na -agụ nri, na ọbụna ngwa mgbasa ozi na -eji ngwa gị Àdịmnòtù Dị Ezigbo Mf. (RSS) nri.
Mgbe ị na -emetụ aka ma na -ebuli ọdịnaya ọ bụla maka ọwa ọ bụla nwere ike iwepụta njikọ aka na nzaghachi dị mma, ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ike ime nke a. Nke a bụ ebe akpaaka dị mma - yana ijikọ ọdịnaya gị na ndepụta gị na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta bụ ezigbo ngwọta. Ọtụtụ nyiwe anaghị enye ihe RSS na Google My Business nhọrọ, n'agbanyeghị!
OneUp na Google My Business
OneUp na -enyere ndị ọchụnta ego aka ịhazi oge na akpaaka ha Google My Business posts. Ikpo okwu na-enyere ndị ọrụ aka biputere n'otu ma ọ bụ ọtụtụ ọnọdụ n'otu oge, gbakwunye onyonyo, njikọ na bọtịnụ ịkpọ oku. Ịnwere ike bulite onyonyo na ngalaba foto gị.
OneUp abụghị naanị maka Google My Business, ọ na -ejikọkwa na Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, na Pinterest. Atụmatụ gụnyere:
Jikwaa ọtụtụ akaụntụ na ngalaba - Mepụta otu ka ijikọ akaụntụ ọnụ, wee hazie ma hichapụ posts site na otu ndị ahụ.
Kalenda Media -Hụ nchịkọta nke posts niile na-abịa na ebipụta, dezie ha, na ịdọrọ na dobe ka ị gbanwee ụbọchị.
Njikọ Canva - Mepụta foto n'ime Canva na -ahapụghị OneUp, ma tinye ha ozugbo na post gị.
Analytics -Lee nyocha dị omimi wee mepụta akụkọ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa maka akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta gị niile.
Hashtag jenerato - Nweta aro maka hashtags metụtara isiokwu gị, wee tinye ha na post gị ma ọ bụ na nkọwa mbụ (maka Instagram).
Ọtụtụ onyonyo na vidiyo -Hazie ihe onyonyo onyonyo nwere ihe ruru 5 na post ọ bụla, yana vidiyo.
Hazie akụkọ gbasara Instagram - Jiri anya mee atụmatụ ma hazie Akụkọ Instagram, wee bipụta ya site na ọkwa ekwentị.
Nnukwu Bulite Posts Ọha - Bulite ma hazie ọtụtụ posts n'otu oge site na CSV, Google Drive, Dropbox, ma ọ bụ na kọmputa gị ozugbo.
Facebook - Hazie oge maka profaịlụ Facebook (site na ọkwa ekwentị), yana ibipụta na ibe Facebook na otu dị iche iche.
Bido nnwale nnwere onwe ụbọchị 7 nke OneUp gị
Tags: nnukwu bulite google azụmahịa mNjikọ Facebookndepụtandepụta nrigmbgoogle azụmahịa mhashtag jeneratoinstagram akụkọnchọta mpagharaobodo seobiputere google azụmahịa mrss nrihazie google azụmahịa mtọọ oge mgbasa ozi mgbasa ozikalenda mgbasa oziụkọ
Ịtụgharị uche: Nhọrọ dị fechaa, enweghị kuki na nchịkọta Google